यी महिलाको रहस्यमय मृत्यु : यो हत्या हो कि अात्महत्या ? - Everest Dainik - News from Nepal
यी महिलाको रहस्यमय मृत्यु : यो हत्या हो कि अात्महत्या ?
रौतहट । यहाँ एक महिलाको गएराति शंकास्पद मृत्यु भएको छ ।
कटहरिया नगरपालिका–१ हर्षाहाटोलका मुुकेश चौरसियाकी श्रीमती २५ वर्र्षीया सीमादेवीको शव घरभन्दा करीब २०० मिटर उत्तरतर्फको खेत आली छेउमा आज बिहान बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस मौलापुरमा सुुरुङ खनेर लाखौँको चोरी
मुकेश पछिलो चार महिनाअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएको पीडित परिवारले जनाएको छ । सीमाका घरमा सासू र एक दृष्टिविहीन ससुुरा छन्।
याे पनि पढ्नुस एमाले–माओवादीको भेलामा बम प्रहार, ११ घाइते
याे पनि पढ्नुस सेफ्टी ट्याङ्कीमा निस्सासिएर ३ जनाको मृत्यु